CARICATURES NA FOTO ONLINE - ỌRỤ NTANETỊ - 2019
Mee caricatures na foto online
Kedu n'ime ndị na-arụ ọrụ na Windows operating system did not play in Solitaire or Spider? Ee, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ ọbụla ọ dịkarịa ala otu oge ọ na-eji oge n'efu ya na-egwu solitaire ma ọ bụ na-achọ mines. Spider, Soliter, Solitaire, Minesweeper na Obi aghọwo akụkụ dị mkpa nke sistemụ. Ma ọ bụrụ na ndị ọrụ na-ezute ha, ihe mbụ ha na-achọ bụ ụzọ isi weghachi ntụrụndụ nkịtị.
Iweghachi egwuregwu kọmputa na Windows XP
Ighaghachi egwuregwu nke na-abịa na Windows XP arụ ọrụ arụmọrụ anaghị ejikarị oge na-achọghị nkà kọmputa pụrụ iche. Iji weghachite ebe ntụrụndụ na-emebu, anyị ga-achọ ikike nchịkwa na disk diski nke Windows XP. Ọ bụrụ na enweghị disk diski, ị nwere ike iji kọmputa ọzọ na-arụ ọrụ arụmọrụ Windows XP na egwuregwu arụnyere. Ma, ihe mbụ na mbụ.
Usoro 1: Ntọala System
Tụlee nhọrọ mbụ iji weghachite egwuregwu, ebe anyị chọrọ nkwụnye nrụnye na onye nchịkwa.
Nke mbụ, tinye disk ahụ nrụnye n'ime ụgbọala (ị nwekwara ike iji ngwa flash USB nwere ike gbanye).
Ugbu a gawa "Ogwe njikwa"site na ịpị bọtịnụ ahụ "Malite" na ịhọrọ ihe kwesịrị ekwesị.
Ọzọ, gaa na ụdị "Tinye ma ọ bụ Wepụ Mmemme"site na ịpị bọtịnụ òké aka ekpe na aha ụdị.
Ọ bụrụ na ị na-eji kpochapụ anya anya "Ogwe njikwa", mgbe ahụ, anyị na-ahụ ngwa nchịkọta ahụ "Tinye ma ọ bụ Wepụ Mmemme" na pịa okpukpu abụọ na bọtịnụ aka ekpe, gaa na mpaghara kwesịrị ekwesị.
Ebe ọ bụ na egwuregwu standard bụ components nke sistemụ arụmọrụ, na aka ekpe, pịa bọtịnụ "Ịwụnye ihe dị na Windows".
Mgbe obere oge kwụsị ga-emeghe Ọkachamara Windows ComponentNke a ga-egosipụta ndepụta nke ihe niile ederede. Pịgharịa gaa na listi ma họrọ ihe. "Usoro mmemme na ịba uru".
Push bọtịnụ ahụ "Ngwakọta" na n'ihu anyị ga-emepe ìgwè ahụ, nke gụnyere egwuregwu na ngwa ngwa. Ọ bụrụ na i tinye akàrà ahụ "Egwuregwu" ma pịa bọtịnụ ahụ "OK", mgbe ahụ, anyị ga-agbanye niile egwuregwu. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhọrọ ụfọdụ ngwa, wee pịa bọtịnụ ahụ "Ngwakọta".
Na windo a, a na-egosipụta ndepụta nke egwuregwu niile dị na ya ma ọ na-anọgide na anyị ka anyị zọpụta ndị anyị chọrọ ịwụnye. Ozugbo ịchọrọ ihe niile ị chọrọ, pịa "OK".
Pịa bọtịnụ ọzọ "OK" na windo "Usoro mmemme na ịba uru" ma laghachi Nhazi Windows Components. N'ebe a, ị kwesịrị ịpị "Na-esote" iji dozie akụkụ ndị a họrọ.
Mgbe ị na-eche ka usoro nwụnye iji mechaa, pịa "Emere" ma mechie windo na-enweghị isi.
Ugbu a, egwuregwu niile ga-adị na ya ma nwee ike ịnụ ụtọ Minesweeper ma ọ bụ Spider, ma ọ bụ ihe egwuregwu ọ bụla ọzọ.
Usoro 2: Detuo egwuregwu site na kọmputa ọzọ
N'elu elu, anyị lere anya iji weghachite egwuregwu ma ọ bụrụ na e nwere nrụnye nrụnye na sistemụ arụmọrụ Windows XP. Ma ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na enweghị disk, mana ịchọrọ igwu egwu? N'okwu a, ị nwere ike iji kọmputa nke egwuregwu ndị dị mkpa. Ya mere, ka anyi bido.
Maka nmalite, na kọmputa ebe eji arụ egwuregwu, gaa na nchekwa "System32". Iji mee nke a, meghee "Kọmputa m" wee gaa n'ihu ụzọ: usoro diski (na-abụkarị diski "C"), "Windows" na n'ihu "System32".
Ugbu a, ịchọrọ ịchọta faịlụ nke egwuregwu ndị a chọrọ ma detuo ha na kọmputa USB. N'okpuru ebe a bụ aha faịlụ na egwuregwu kwekọrọ.
sol.exe -> Solitaire Solitaire
msheart.exe -> Egwuregwu Kaadị "Obi"
winmine.exe -> Minesweeper
Iji weghachi egwuregwu ahụ "Pinball" mkpa iga akwukwo "Faịlụ mmemme"nke dị na mgbọrọgwụ nke usoro diski ahụ, mepee folda ahụ "Windows NT".
Ugbu a detuo ndekọ ahụ "Pinball" na-agba ọsọ ọsọ na egwuregwu ndị ọzọ.
Iji weghachite egwuregwu Ịntanetị, ị ga-edetuo dum nchekwa. "Mpaghara egwuregwu nke MSN"nke dị "Faịlụ mmemme".
Ugbu a, ị nwere ike idetuo egwuregwu niile na ndekọ dị iche na kọmputa gị. Ọzọkwa, ị nwere ike idowe ha na nchekwa dị iche iche ebe ị ga-adị mfe. Na ịmalite ọ dị mkpa iji pịa bọtịnụ akaekpo ekpe abụọ-pịa faịlụ ahụ.
Ya mere, oburu na i nweghi egwuregwu di iche iche na usoro, enwere uzo abuo iji weghachi ha. Ọ ka na-ahọrọ nke dabara na ikpe gị. Otú ọ dị, ọ bara uru na-echeta na na mbụ na nke abụọ ikpe ziri ezi ikike.